suyutu replied to nandakyawswar1's discussion facebook Account ကို ဘယ္လိုပိတ္ရမလဲ"ဒီမှာက ဘယ်လိုတိုင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ link ပါ။"Feb 21suyutu replied to nandakyawswar1's discussion facebook Account ကို ဘယ္လိုပိတ္ရမလဲ"အဲဒိလူကို အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးပြောကြည့်ပါလား။ မရရင်တော့ facebook ကို report လုပ်လို့ရပါတယ်။ Link ကဒီမှာပါ ။ ဒီအထဲကမှ သင့်တော်တာ တစ်ခုကိုရွေးပြီး သတင်းပို့ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ဒီလူ့အကြောင်းပြောထားပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့သူမ ဟန်ဆောင်ပြီးတော့…"Feb 21suyutu replied to sungelay's discussion how to develop CMS? in the group Web Developer"အကြံတစ်ခုတော့ ပေးချင်ပါတယ်။ Xampp ကို install လုပ်ထားပါလား။ Wordpress ရော SQl ရော Php ရော Local machine မှာတင် run လို့ရပါတယ်။ Local machine မှာပဲ အရင်စမ်းကြည့်ပေါ့။ အဲဒိမှာ ရတယ်ဆိုမှ remote server နဲ့ စမ်းပေါ့။ အခုမှ စလုပ်မယ်ထင်လို့ ပြောတာပါ။…"Feb 19suyutu replied to Sai Khaing Kham's discussion ေနျပည္ေတာ္ကေန outlook express 2010 သံုးဖို႔အတြက္ ဘယ္လို setting ခ်ရမလဲ ? in the group Web Developer"gmail ကိုသုံးတာလား၊ gmail ကို outlook နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် latest patch ကို download ချဖို့လိုတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဝင်းဒိုးစ်က ခိုးသုံးထားတာ/ crack version ဆိုရင် ဝင်းဒိုးစ် ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ Thunderbird နဲ့လဲ စမ်းကြည့်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့…"Feb 19suyutu joined leojack's groupWeb DeveloperHTML, XHTML, PHP, ASP, CGI ,PL စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးရအောင်... Web Developer ဖြစ်ရင်ဝင်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။Feb 19 28
suyutu replied to nandakyawswar1's discussion အားလုံးပဲမဂၤလာပါ"<div style="font-family:myanmar3,padauk,thanlwin;">တကယ်လို့ data ကအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပါဝါ ထပ်မပေး တာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့harddisk တွေကပါဝါပေးလိုက်ရင် data ပါပေျာက်သွား တတ်ပါတယ်၊ လုံးဝ ပျက်မသွားခင်ကဘာတွေဖြစ်သေးသလဲ။…"Feb 18suyutu replied to Phyu Thwe Phyu's discussion Zawgyi Font cannot display in Windows7asafile name">Alternative method for the everstand is right click on the desktop and choose personalization. To see the zawgyi font on the browser tab is changing message box font to zawgyi-one. ဒါပေမဲ့ ယူနီကုဒ် font ကိုသုံးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။…"Feb 13suyutu replied to Ko Chit's discussion Unicode Migration Q&A" ဟုတ်ပါတယ်။ font busters ရဲ့ script http://userscripts.org/scripts/review/42941 မှာ zawgyi ကို ရှာပြီးတော့ ဇော်ဂျီရှိတဲ့နေရာတွေမှာ font-family:Zawgyi-One လို့ရေးပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့…"Jan 28suyutu replied to Ko Chit's discussion Unicode Migration Q&A"I want to know how do add this comment box. Is there plug in or you wrote it manually. It let user to write the html code."Jan 28suyutu replied to Ko Chit's discussion Unicode Migration Q&A"ဒီစာက ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးထားတာပါ။ ဇော်ဂျီနဲ့လဲဖတ်လို့ရမှာပါ။"Jan 25suyutu updated their profileJan 25suyutu is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsJan 25 Welcome Them! RSS
devillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်17 hours agopeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်yesterdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်MondayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Fridaypyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ (ျမန္မာလို)စာအုပ္ေတြေဒါင္းလုပ္လုပ္မယ္ (ဦးေအာင္ဟိန္းေက်ာ္၊ဦးသိန္းလြင္၊ေရႊမင္း၀န္ဦးဘုန္း.....)Nov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookၿမန္မာ Data Traveller ဆိုက္ေလးNov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookၿမန္မာ Data Traveller ဆိုက္ေလးNov 23Hsatpaing joined Shwe Thaik's groupMyanmar WebsitesNov 22 11